Repoblika Dominikana : Mpianatra Iray Namoy ny Ainy Nandritra Ny Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Repoblika Dominikana : Mpianatra Iray Namoy ny Ainy Nandritra Ny Fihetsiketsehana	Voadika ny 13 Novambra 2012 1:35 GMT
Zarao: Hetsika samihafa ho fanoherana ny volavolan-dalàna no nokarakaraina [es] Tamin'ny fandrenesana ny fanitsiana ny hetra napetraka tao amin'ny Kongresy Nasionaly, izay niteraka tsy fahafaliana goavana teo amin'ny fiarahamonim-pirenena. Natomboka tamin'ny 4 Oktobra ny hetsika , tamin'ny fotoana nambarana ny volavolan-dalàna. Na dia izany aza niha-nahazo hery ny fihetsiketsehan'ny olom-pirenena nanomboka ny talata 6 novambra izay tsy mitsahatra ny mahazo olona hatrany.
Ny Alakamisy 8 Novambra, ny Oniversite Mizaka tena Domingo, oniversitem-panjakana tokana ao amin'ny firenena, no sehatry ny iray tamin'ireo fihetsiketseha-panoherana ny governemanta. Saingy araka ny mahazatra—ary na dia eo aza ny fitsipika samihafa mandràra izany—nifandona tamina vondrona polisy mitam-piadina ny mpianatra, izay nahatonga ny fahafatesan'i William Florián Ramírez, 21 taona [es], mpianatra mpitsabo taona fahatelo, tratran'ny bala teo amin'ny tratrany.
Ilay mpianatra nisy namono, Willy Florián, noentina nanalavitra ny korontana ataon'ireo olona misaron-tava izy. Niparitaka be tamin'ny aterineto ity sary ity.
Fotoana fohy taty aoriana, nameno ny tambajotra sosialy sy ny onjam-peo piraty ny fahatezerana. Lehiben'ny fiarahamonim-pirenena Elizabeth Mateo, fanta-daza amin'ny maha-mpitari-tolona azy hamindrana ny 4%n'ny harin-karena faobe (PIB) ho any amin'ny fampianarana, namoaka ity manaraka ity tao amin'ny Twitter:
@ElizabethMateo: Manameloka ny famonoana ilay mpianatra ao amin'ny UASD aho. Mitaky ny fitsarana aho.
Tahaka izany, hoy ilay mpanao famorotorana, mpanoro hevitra sy mpanadihady Olaya Dotel nanambara:
Niantso ho amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ny tanora lehilahy. Nalaina tao amin'ny pejin'ny Ivon-toerana Bonó.
@OlayaDotel: Tsy mendrika na dia ny rà indray mitete an'ny tanorantsika aza ireo olona mpanao kolikoly ireo…tsy mila intsony!!!
Niparitaka lavitra ny adihevitra ka i René, mpihira ao amin'ny tarika Poerto Rikana malaza Calle 13, naneho hevitra mikasika ny zava-nitranga:
@Calle13Oficial: Aty amin'ny Repoblikan’ Dominikana ny mason'izao tontolo izao, manantena fa hiseho ny marina mikasika ny fahafatesan'ilay tanora mpianatra mpitsabo Willy Warden!
Niseho izany zava-doza rehetra izany raha hita fa, nandritra ny fihemoran'ny fiharian-karena sy ny fiakaran'ny vidin'entana izay hatrehin'ny firenena ankehitriny,
Milanja sorabaventy ao ivelan'ny Kongresy Nasionaly ny tanora, ho fanoherana ny Fanitsiana ny hetra. Nahazoan-dalana ny famoahana ny sary tao amin'ny pejin'i Bonó.
Nakarin'ny minisitry ny Fampianarana, Josefina Pimentel 62% [es], RD$185,000.00 niakatra ho RD$300,000.00 isam-bolana, mitovy ny USD $7,500.00 ny karamany manokana.
Ny fitambaran'izany sy ny fisian'ny olana hafa sasany, izay tsy mahakivy ny mpanao fihetsiketsehana, no nanaovao ny saina revolisionerana anatin'izy ireo. Vondron'olona manodidina ny 100 teo, anisan'izany ny olo-malaza avy amin'ny fampahalalam-baovao, no tonga nitangorona teo anoloan'ny tranoben'ny Fondation Global ho an'ny Demokrasia sy ny Fampandrosoana [es] (FUNGLODE), ivon-toerana napetraky ny filoha teo aloha Leonel Fernández Reyna, izay fantatra fa tompon'andraikitra tamin'ny fahapotehan'ny firenena nandritra ny valo taona nitondrany (jereo eto ny lahatsary) [es].
Nametraka labozia teny amin'ny arabe ny mpanao fihetsiketsehana ary nihirahira fanamelohana tamin'ny feo miray, izay vokatry ny fon'izy ireo. Twitter no fitaovana nitateram-baovao betsaka mikasika ny hetsika, tamin'ny alalan'ny fampiasana miaraka ny tenifototra #FrenteaFunglode. Mpitati-baovao Maribel Hernández nizara ity tao amin'ny kaonty Twitter-ny:
@MaribelNexos: Polisim-pirenena, jiolahim-boto mpamono olona, nitifitra ny vahoaka #FrenteaFunglode.
@MaribelNexos: Nohorakorahan'ny vahoaka ny Fondation Global, henatry ny firenena. #FrenteaFunglode #FrenteaFunglode
Tsy mijanona eo anefa ny hetsika. Fikambanan'olom-pirenena sy olo-tsotra no nameno ny aterineto tamin'ny fampisehoana zava-baovao, tamin'ny alalan'ny dokambarotra marobe sy sary manohitra ny mpiara-dia amin'ny governemanta sy ny fitantanana ankehitriny, tahaka ireto naseho eto ambany ireto. Tao anatin'izany ihany, fanentanana isan-karazany amin'ny ambaratonga rehetra no nokarakaraina tamin'ny Zoma 9 Novambra, toy izany ihany koa isaky ny faran'ny herinandro. Avelako ianao amin'ireto sombin'ny antso ho amin'ny fihetsiketsehana sy sombiny haisary manasongadina ny hetsika.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraPamela Martínez Achecar
Tantaran'ny Amerika Latina farany 11 ora izayMeksikaNahoana Ireo Vondrom-piarahamonina Teratany Ao Meksika No Mila Fiarovan-tena Ho An'ny Vondrom-piarahamonina
Vakio amin'ny teny English, Français, Swahili, Dansk, Español
Amerika LatinaKaraibaRepoblika Dominikana
FanoheranaMediam-bahoakaPolitikaToekarena sy FandraharahànaVaovao Mafana